Taageerayaasha Arsenal oo si adag loo baari doono ka hor kulanka habeen dambe ee PSG ee tartanka Champions League…(Sidee wax u jiraan?) – Gool FM
Taageerayaasha Arsenal oo si adag loo baari doono ka hor kulanka habeen dambe ee PSG ee tartanka Champions League…(Sidee wax u jiraan?)
(London) 12 Sebt 2016. Taageerayaasha Arsenal ayaa habeen dambe marka ay kooxdoodu wajaheyso PSG tartanka Champions League mari doona baaritaano adag oo waqti qaadanaya sababo la xiriira amniga.
Baaritaanada adag ayaa ka dhici doona gegada Parc de Princes sababo la xiriira cabsi laga qabo argagixisada maadaama uu dalka Faransiiska ay ka dhacayeen weeraro argagaxisanimo 18-kii bilood ee ugu dambeysay.
Hogaamiyayaasha Arsenal ayaa u diray taageerayaashooda warqad ama fariin loogu sheegayo in baaritaano dheeri ah la marsiin doono kulanka habeen dambe oo lagu sugayo amniga taageerayaasha.
Warqada la diray ayaa waxaa ka mid ah inay ku qorneyd in taageerayaasha aan loo ogolaan doonin inay galaan garoonka iyagoon wadan warqadan ama Email caddeynaya iyo ID Card oo ay soo raacsiin doonaan tikidhka ay ku soo galayaan garoonka.
Taageerayaasha Gunners ayay ku qaadan kartaa habeen dambe inay galaan garoonka Parc des Princes muddo labo saacadood iyo bar ah.
Baaritaanadan xooga leh ayaa waxay ka dhalatay in dalka Faransiiska uu marti galinayay qaraxyo argagaxisanimo 18-kii bilood ee ugu dambeeyay iyadoo la xusuusto in qaarkood lala beegsanayay garoomada kubbada cagta.
Paul Pogba oo ciideysanaya misane idin leh “CIID WANAAGSAN”
Mauro Icardi oo buuga taariikhda ka galay Inter Milan kaddib markii uu ka sara maray Ronaldo